Izinto zokusetshenziswa eziyinhloko ze-ultra- high power graphite electrode body are import oil oil coke. Inqubo yokukhiqiza ifaka phakathi ukuchoboza, ukuhlola, ukufaka i-Dosing, ukuxolela, ukwakha, ukubhaka, ukumitha, ukubhaka okwesibili, i-graphitization nemishini. Okusetshenziswayo kwezingono ukungenisa i-coke yenaliti kawoyela, inqubo yokukhiqiza ifaka ukumitha kathathu kanye nokubhaka amahlandla amane. Izinga le-ultra-high power graphite electrode nengono UHP Graphite electrode Evumelekile umthwalo wamanje Ult ...
Ama-electrode we-graphite ephezulu anamandla akhiqizwa nge-coke esezingeni eliphakeme (noma i-coke yenaliti esezingeni eliphansi). Inqubo yokukhiqiza ifaka phakathi ukubala, ukubhoboza, ukuxova, ukubumba, ukubhaka, ukudipha, ukubhaka kwesibili, i-graphitization nokusebenza kwayo. Impahla eluhlaza yengono ingeniswa i-coke yamafutha enaliti, futhi inqubo yokukhiqiza ifaka ukudipha kabili nokubhaka okuthathu. Izakhiwo zayo zomzimba nezomshini ziphakeme kunezijwayelekile zama-graphite electrode kagesi, njenge-resistivity ephansi i ...
Impahla esemqoka eluhlaza yomzimba ojwayelekile wamandla we-graphite electrode yikhwalithi ephezulu ye-petroleum coke, esetshenziswa kakhulu esithandweni sikagesi se-arc sokwenza insimbi. Inqubo yokukhiqiza ifaka phakathi ukubala, ukugoqa, ukuxolela, ukwakha, ukuwosa, ukwenza imidwebo kanye nokwenza imishini. Izinto zokusetshenziswa zengono yi-coke yenaliti kanye ne-coke ephezulu ye-petroleum, futhi inqubo yokukhiqiza ifaka ukumitha okukodwa kanye nokuwosa amabili. IHexi Carbon yinkampani ekhiqizayo ekhiqiza, ithengise, ithumele futhi ithengise ...
I-graphite electrode ngokuhlanganyela isesekeli se-graphite electrode, esetshenziswa kanye ne-graphite electrode. Uma isetshenziswa, idinga ukuxhumeka ngentambo yesikulufu yekhanda le-graphite electrode lesifazane. I-graphite electrode ngokuhlanganyela idlala indima ebaluleke kakhulu ekwenziweni kwensimbi, okuthinta ngqo umsebenzi we-graphite electrode. Uma kungekho okuhlanganisiwe kwekhwalithi ephezulu, i-graphite electrode izophuka kalula futhi ivuleke kalula, okuholele ezingozini. Ngakho-ke, umbuso unezimboni zikazwelonke ...
I-hexi carbon ikakhulu ikhiqiza ama-graphite electrode. Ngaphandle graphite electrode, nathi ukukhiqiza imikhiqizo ethile graphite. Inqubo yokukhiqiza yale mikhiqizo ye-graphite inenqubo efanayo nokuhlolwa kwekhwalithi njengama-graphite electrode. Imikhiqizo yethu ye-graphite ikakhulu ifaka i-graphite crucible, i-graphite cube, induku ye-graphite ne-carbon rod, njll. Amakhasimende angenza ngokwezifiso imikhiqizo ye-graphite enezimo ezihlukile ngokuya ngezidingo zabo. Inqubo yokukhiqizwa kwemikhiqizo ye-graphite ukuxuba uphethiloli ...
Inqubo yokukhiqizwa kwesikwele se-graphite block / graphite ifana naleyo ye-graphite electrode, kepha akuyona umkhiqizo we-graphite electrode. Kungumkhiqizo oyisikwele we-graphite electrode, owenziwe ngezinto ze-graphite block ngokuchoboza, ngesihluzi, ngokushaya, ngokwenza, ukupholisa ukuwosa, ukudipha kanye ne-graphitization. Kunezinhlobo eziningi zamabhulokhi we-graphite / izikwele ze-graphite, futhi inqubo yokukhiqiza iyinkimbinkimbi kakhulu. Umjikelezo wokukhiqiza ojwayelekile ungaphezu kwezinyanga ezi-2. Ngokuvumelana ne...
Izinduku ze-graphite ezikhiqizwa yi-Hexi Carbon Company zine-conductivity enhle kagesi, i-conductivity eshisayo, i-lubricity nokuqina kwamakhemikhali. Izinduku ze-graphite kulula ukuzicubungula futhi zishibhile, futhi zingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene: imishini, insimbi, imboni yamakhemikhali, ukusakaza, ama-alloys angenazinsimbi, izitsha zobumba, ama-semiconductors, imithi, ukuvikelwa kwemvelo njalonjalo. Izinduku eziningi ze-graphite ezikhiqizwe yinkampani yethu zisetshenziswa ngamakhasimende ezintweni zokushisa kagesi ezithandweni eziphezulu zokushisa ...
I-graphite powder yokufakelwa, i-graphite powder yemvelo kanye ne-graphite scrap ingasetshenziswa njenge-ejenti ye-carburizing. Sisebenza ngokukhethekile ukukhiqiza i-graphite powder yokufakelwa kanye ne-graphite scrap 1, i-synthetic graphite powder, eyaziwa nangokuthi i-graphite yokufakelwa, ikhiqizwa ngenkathi kucutshungulwa i-graphite electrode futhi ingeyomkhiqizo wayo. Ngaphezu kwalokho, i-graphite powder ingatholwa ngokubala i-petroleum coke powder ezingeni lokushisa elithile bese iyifaka. I-graphite powder inokusebenza okuphezulu, i-wid ...
I-graphite tile yakhelwe futhi yaguqulwa yi-Hexi Company ngamaphutha ezindleko eziphakeme nempilo yesevisi emfushane yamakhanda kagesi ekhanda lethusi esithandweni sikagesi. I-graphite tile conductive isetshenziswa esikhundleni sethusi lekhanda lethusi futhi isetshenziswa esithandweni sikagesi esingu-6.3 MVA. Ngenxa yalokhu, impilo yenkonzo yayo yinde, inani lezindawo zokuma ezishisayo zesithando somlilo lincishiswe kakhulu, futhi izindleko zokukhiqiza zincishiswe kakhulu. I-graphite tile iqanjwe ngokuma kwayo, okufana nethayela elisetshenziswe ku ...